Jose Mourinho: “Waan Jeclaan Lahaa In Aan Eden Hazard Ku Heeysto Kooxdeeyda Manchester United’. – Cadalool.com
Jose Mourinho: “Waan Jeclaan Lahaa In Aan Eden Hazard Ku Heeysto Kooxdeeyda Manchester United’.
Ka hor kulanka u dhaxeeya kooxaha Chelsea Iyo Man Utd Tababaraha Manchester United Jose Mourinho ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu Eden Hazard ku maamulo kooxda ku ciyaarta Old Trafford, lakiin waxa uu qirtay inaysan macquul aheyn saxiixa weeraryahanka Chelsea.
Hazard ayaa qaab ciyaareed wanaagsan ku soo bandhigay Chelsea xilli ciyaareedkan, isagoo hogaaminaya gool dhalinta horyaalka Premier League madaama uu dhaliyay sideed gool iyo seddex uu caawiyay kadib 10 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan kooxdiisa .
Xidiga heerka caalami ee dalka Belgium, oo weli lala xiriirinayo Real Madrid, ayaa dhawaan sheegay inuu doonayo inuu la shaqeeyo Mourinho ka dib markii uu kasoo hoos ciyaaray tababaraha reer Portugal.
Mourinho ayaa sheegay inuu si cad u jeclaan lahaa in uu la midoobo xidigiisii hore waxana uu saxaafada u sheegay “waa ciyaaryahanka ugu fiican Premier League,” ayuu yiri Jose inkastoo tababaraha Red Devils uusan rumeysaneynin in heshiiska uu dhici karo.
“Waan jeclaan lahaa inaan isaga ku heeysto Manchester United lakiin uma maleynayo inay Chelsea ka iibin doonto Manchester United, sidaasi darteed ma ahan dhibaato” ayuu Mourinho u sheegay suxufiyiinta.
“Taariikhda ayaa inoo sheegeysa in Eden Hazard uu yahay ciyaaryahanka ugu fiican Premier League, Chelsea waa horyaalka, aniga ayaa ku sameeyay , Antonio Conte sidoo kale .” Chelsea waawaa tartamayaasha ugu xoogan haatan, sababtoo ah waxa ay heeysataa ciyaaryahan noociisi ahoo sameeyn kara farqi weyn.
“Chelsea waxaa hogaaminaya dad leh qibrada iyo caqliga kubada cagta, waxaan qabaa inaysan marnaba iibin doonin Eden Hazard” ayuu yiri.
United, ayaa u baahan in ay guul kazoo gaarto kulanka Chelsea ee qeeybta ka ah horyaalka Premier League, oo ay booqan doontaa Chelsea kulanka galabta sabtida.